Offset နဲ့ မစေ့စပ်ခင်ကတည်းက တိတ်တဆိတ်လက်ထပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်လို့ ဖွင့်ပြောလာခဲ့တဲ့ Cardi B
လောလောဆယ်မှာ ကိုယ်ဝန်အရင့်အမာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ Cardi B ဟာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အတွင်းရေးတချို့နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သူမရဲ့ Twitter ပေါ်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္လာနေ့တုန်းက အခုလိုပဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
“ကျွန်မမှာ တစ်လောကလုံးကို အသိပေးချင်တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ အများကြီးရှိသလို၊ ဘယ်သူ့ကိုမှ ပေးမသိချင်ဘဲ ကိုယ့်ရင်ထဲမှာသာ သိမ်းထားချင်တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ၊ ကိစ္စတွေလည်း အများကြီး ရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုဆိုတော့ လက်ထပ်ထားတဲ့ ကိစ္စဟာလည်း ကိုယ့်ဟာကိုယ် သိမ်းထားချင်တဲ့ အထဲမှာပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်”
၂၀၁၅ နောက်ပိုင်းမှ Instagram လိုနေရာမျိုးကနေစပြီး ကျော်ကြားလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီး Rapper တစ်ယောက်ဖြစ်သူ Cardi B ဟာ အဲဒီစာတွေကို Note တစ်ခုထဲမှာ ရေးထားပြီး Screen Shoot ရိုက်ထားတဲ့ပုံကိုသာ Twitter ပေါ်မှာ တင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီပုံထဲမှာ သူမ ဆက်ရေးထားသေးတာတွေက အောက်ပါအတိုင်းပါပဲ။
“ကျွန်မတို့ စုံတွဲရဲ့ ဆက်ဆံရေးကတော့ ရန်ဖြစ်လိုက်၊ ပြန်ချစ်လိုက်နဲ့ပဲ အများကြီး ရင့်ကျက်လာကြပြီလို့ ဆိုရမှာပဲပေါ့ရှင်။ ပြီးတော့ ကျွန်မတို့ဟာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အဆုံးအရှုံး မခံနိုင်ကြတော့ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ မနက်ခင်းတစ်ခုမှာ ကျွန်မတို့တွေ အိပ်ရာကနေ နိုးထလာခဲ့ကြတုန်းက ချက်ချင်း လက်ထပ်လိုက်ကြဖို့ ဆုံးဖြတ်မိခဲ့ကြတော့တာပါပဲရှင့်။ ပြောရမယ်ဆိုရင်လေ… အဲဒီတုန်းက ကျွန်မတို့ လက်ထပ်ပွဲမှာ မင်္ဂလာဝတ်စုံတွေ၊ မိတ်ကပ်တွေနဲ့ လက်စွပ်တွေ ဘာတွေ မပါခဲ့ဘူးရှင့်။ ပြီးတော့ ကျွန်မတို့ကို လက်ထပ်ပေးဖို့ လိုက်ရှာထားခဲ့ရတဲ့ အစ်ကိုတစ်ယောက်နဲ့ ကျွန်မတို့စုံတွဲကလွဲရင် အိပ်ခန်းထဲမှာ ဘယ်သူမှလည်း မရှိခဲ့ပါဘူး”
တကယ်တော့ အားလုံးသိထားခဲ့ကြတဲ့ သတင်းက Cardi B ဟာ သူမ ချစ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်သလို သူမလွယ်ထားရတဲ့ ရင်သွေးလေးရဲ့ ဖခင်လောင်းဖြစ်သူ Offset နဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ အောက်တိုဘာလထဲမှာ လူသိရှင်ကြား စေ့စပ်ထားခဲ့တယ် ဆိုတဲ့သတင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့စေ့စပ်ကြတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကလည်း Cardi B ကို Offset က စိန်လက်စွပ်လေး တစ်ကွင်းနဲ့ လူမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာ ဒူးထောက်ပြီး လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့ရင်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။
ဒါပေမဲ့ Rapper တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Offset နဲ့ သူမတို့ဟာ အဲဒါတွေ မတိုင်ခင်ကတည်းက ဘယ်သူမှမသိအောင် တိတ်တဆိတ် လက်ထပ်ထားပြီးသား ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို Cardi B က အခုကျတော့မှ ရုတ်တရက်ထပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောတော့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ခုလို ထပြောတယ်ဆိုတာကို သူမကလွဲပြီး ဘယ်သူမှ မသိနိုင်တာ အမှန်ပါ။
အဲဒီ SS ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးထဲမှာ Cardi B ဆက်ရေးထားတာတွေကတော့… သူမရဲ့ ခင်ပွန်းက သူမကို ခုထိ လိုလိုချင်ချင်နဲ့ ချစ်နေပေးတာကို သူမဘက်က တန်ဖိုးထားပြီး ချစ်ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုလို့ ပြောနိုင်တဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူက ဒူးထောက်ပြီး ကိုယ့်ကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းတာကို ခံစားလိုက်ရတဲ့ အခိုက်အတန့်လေးဟာလည်း သူမအတွက် တကယ့်ကို ထူးခြားတဲ့အချိန်လေးပဲ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေတင်မကသေးဘဲ ပုံလေးထဲမှာ သူမဆက်ရေးထားသေးတဲ့ နောက်ဆုံး စာကြောင်းလေးက နည်းနည်း ပြုံးချင်စရာပါ။ (တချို့တွေကို ရွဲ့ရေးထားပုံ ရပါတယ်။)
“ကောင်းပြီ… အခုလို မင်္ဂလာဆောင်ထားပြီးမှ ကျွန်မက ဒီကလေးကိုမွေးမယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေကို ရှင်တို့သိပြီးသွားကြပြီဆိုတော့ အနည်းဆုံး စပ်စုချင်စိတ်တွေ ရပ်သွားလိမ့်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ်” အဲဒီလို စာတွေပါတဲ့ SS ပုံလေးကို အသက် ၂၅ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Cardi B က စာတချို့နဲ့ တွဲတင်ပါသေးတယ်။
“ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျွန်မရဲ့ album ကို Invasion of Privacy လို့ ပေးထားတာလေ။ လူတွေဟာ ရှင်တို့ရဲ့ ဘဝတွေကို သိပ်စပ်စုကြလိမ့်မှာ အဟုတ်ပဲရှင့်”
I guess it was too much to ask to wait until the official July release of our @rollingston! Even tho it was leaked and suppose to be In gray fuck it !My daughter made it to the Rollin Stone cover Official release in Julyme ❤ROCKSTARS @offsetyrn!You can’t break me ?? pic.twitter.com/ZyHKM7D0eI
‘ကိုယ်ရေးကိုယ်တာထဲကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်း’… လို့ ဘာသာပြန်ရင် ရနိုင်လိမ့်မယ်ထင်ရတဲ့ Invasion of Privacy ဆိုတဲ့ album လေးဟာ အခု ၂၀၁၈ ခုနှစ်ထဲမှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Cardi B ရဲ့ ပထမဦးဆုံးသော album ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု အဲဒီ album ဟာ Billboard 200 မှာ နံပါတ် ၁ နေရာကို ရောက်ရှိနေခဲ့ပြီလို့လည်း သိရပါတယ်။ ။
PREVIOUS POST Previous post: အမွှေစိန် သားနှစ်ယောက်ကြားက Britney Spears ရဲ့ ဖြစ်ပုံတွေ…
NEXT POST Next post: ဆံပင်ဒီဇိုင်းအသစ်နဲ့ ဓာတ်ပုံကြောင့် ပရိသတ်တွေ ဇဝေဇဝါဖြစ်သွားရတယ်ဆိုတဲ့ Celine Dion